100W Ikuku Ngwongwo nke Gas Gas 100W China Manufacturer
Nkọwa:Ebe nchekwa ụgbọ mmiri Gas 100W,Ụlọ ọrụ gas na-acha ọkụ ọkụ 100W,100W Ndị na-emepụta ihe ọkụkụ nke gas
Home > Ngwaahịa > Egwuregwu Gas > 100W Ikuku Ngwongwo nke Gas Gas 100W
100W Ikuku Ngwongwo nke Gas Gas 100W
Ihe Nlereanya.: BB-CSD-100W-B2
Ubu oke: 50000pcs/month
Ebe anyị na-arụ ọrụ ụgbọ mmiri Gas 100W bụ IP65, nke a kwadebere maka ebe gas na ọdụ ụgbọ oloko. Nke a Gas Station Light Fixtures 100W dị mma maka nkwụsịtụ ma ọ bụ n'elu ebe echichi. Mmiri Ndị Na-ahụ Maka Ọkụ Mmiri nke 100W na 100W nwere 60W, 100W, 130W na 150W ike dị iche iche maka nhọrọ. Ebe ikuku anyị na- ekpuchi ọkụ ọkụ bụ slim design slim na-achọ, dị mfe iji wụnye. Ebe ndị na- ekuku gas nọ na- adị ndụ na afọ 5.
120lm/w; Total 12000lm
Ngwaahịa : Egwuregwu Gas
25W Na Na Na Na Na Na Na Na Kpọtụrụ ugbu a
Ebe nchekwa anyanwụ na-enwu gbaa maka Ahịa 25W Kpọtụrụ ugbu a
25W n'èzí n'èzí na-enwu gbaa ọkụ Kpọtụrụ ugbu a
25W Mpaghara Yard Mgbagwoju anya nke anyanwụ dị na IP65 Kpọtụrụ ugbu a
Ebe nchekwa ụgbọ mmiri Gas 100W Ụlọ ọrụ gas na-acha ọkụ ọkụ 100W 100W Ndị na-emepụta ihe ọkụkụ nke gas Ebe nchekwa ụgbọ mmiri gas Ebe nchekwa ụgbọ mmiri na-ekpuchi ọkụ Ebe nchekwa ụgbọala Garage Ebe nchekwa Gas nke 150W Ebube na-echekwa ụgbọ mpempe akwụkwọ